Home News Fahad yaasiin oo Madaxweyne Waare Ku Amray in uu Dekad Muhiim ah...
Fahad yaasiin oo Madaxweyne Waare Ku Amray in uu Dekad Muhiim ah siiyo Qatar!!!
Maamulka Hirshabeelle ayaa qorsheynaya in Dekadda Ceelmacaan ee Gobolka Shabeellaha dhexe uu ku wareejinayo shirkad laga leeyahay dalka Qadar.
Xildhibaan ka tirsan Maamulka Hirshabeelle oo qariyay magaciisa sababo ammaan darteed ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo kullan qarsoodi ah magaalada Muqdisho kula yeeshay Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa waxay ku heshiiyeen in ilaha dhaqaalaha Maamulkaasi gacanta loo geliyay Dowladda Qadar si ay maal gelin ugu sameeyaan.
Waxay si gaar ah mas’uuliyiintan isugu raaceen in Dekadda Ceelmacaan oo bur bur xooggan uu ka muuqdo lagu wareejiyo shirkad laga leeyahay dalka Qadar si ay dib dayactir iyo maalgelin xoogan ugu sameyso dhaqaalaha ka soo xaroodana labo loo kala qeybiyo.
Dowladda Qadar oo galaangal xoogan ku leh Soomaaliya,islamarkaana xulufo dhow ah Madaxtooyada dalka ayaa hadda qorsheyneyso iney la wareegto guud ahaan illaha dhaqaalaha dalka.
Waxaa dood adag ka taagan yahay Dekadaha iyo Garoomada ku yaalo Maamul Gobolleedyada dalka,kuwaasi oo Dowlado shisheeye ay u bir tumanayaan si ay ula wareegaan.
Xiisada ka dhalatay arintaan ayaa hada waxay u dhaxeysa Imaaraadka iyo Soomaaliya,taasi oo sababtay in safaaradaha la kala rarto.